Xog: Beesha Caalamka Oo Diidan In Doorasho Lagu Qabto Magaalo Ka Mid A...
Xog: Beesha caalamka oo diidan in doorasho lagu qabto magaalo ka mid a…
Baraawe (Wararka Maanta) – Beesha caalamka ayaa ka walaacsan inay doorasho ka dhici karto magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose, oo ka mid ah magaalooyinka loo asteeyey deegaan doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka, sida ay ogaatay Wararka Maanta.
Ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa Wararka Maanta u sheegay in xubno ka tirsan beesha caalamka ay qabaan inay halis amni oo xooggan ka iman karto haddii doorasho halkaas lagu qabto, ayada oo ay suurta-gal tahay inay soo weeraraan maleeshiyada Al-Shabaab.
Al-Shabaab ayaa aad ugu xooggan deegaano ku dhow Baraawe, waxaana magaalada ku sugan ciidamo aan badneyn oo isugu jira Soomaali iyo Amisom, oo ay adkaan doonto inay Shabaabka iska caabiyaan haddii weerar culus uu kaga yimaado.
Baraawe ayaa ah caasimadda rasmiga ah ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, inkasta oo aanu maamulka ku shaqeyn oo uu degan yahay Baydhaba, ayada oo mid ka mid ah sababaha ay tahay halista amni ee magaaladan ka jirta.
Xogta aan helnay ayaa sheegeysa in laga fakariyo inaan magaaladaas lagu qaban doorasho, ama la geeyo ciidan xooggan oo Amisom ah, taasi oo u baaqan qarash malaayiin dollar ah.
Haddii la go’aamiyo inaan Baraawe lagu qaban doorasho, waxay fursad siin kartaa maammullada Jubaland iyo HirShabelle, oo horey u doonayey inaysan doorasho ku qaban Garbahaarey iyo Beledweyne, balse laga diiday, kuwaas oo ku doodi kara in deegaan doorashooyinka lagu soo wada koobo min hal magaalo, ama laba magaalo, balse aysan sax aheyn in maamullada midba si gaar ah loola macaamilo.
“Haddii la go’aamiyo inaan Baraawe lagu qaban doorasho waxay albaabada u furi kartaa maamullada kale ee ku doodaya in deegaan doorashada lagu soo koobo hal magaalo. Haddii lagu qabanayana waxay u baahan tahay qarash badan iyo ciidan dheeri ah, marka waa laba ka darran mid dooro,” ayuu yiri sarkaal ku dhow beesha caalamka oo la hadlay Wararka Maanta.
Arrintan ayaa hadda aad looga doodayaa, mana cadda go’aanka laga qaadan doono, ayada oo ay soo dhowaatay doorashada Aqalka Sare oo ah tan ugu soo horreysa, xilli guddiyada doorashada ay hoggaan wada doorteen intooda badan.
Wararka Maanta : Puntland oo markale digniin culus u dirtay ganacsatada - Caasimada Onl...
Puntland oo saraakiil ciidan u xirtay baxsashada maxbuus ku xukunmaa dil…
Sawirro: Mareykanka oo gaadiid dagaal ku wareejiyay DF
Wararka Maanta : Doorashadii aqalka sare oo ay mar kale ku timid dib u dhac
Wararka Maanta : Somaliland: Hablo u xidhnaa calanka Soomaaliya oo xabsiga laga sii daayay
Wararka Maanta : Rooble oo amar siiyey guddiga amniga doorashada + Sawirro - Caasimada ...
Wararka Maanta : Qorshaha Axmed Madoobe uu kusoo saarayo Senataro taabacsan oo la is-ho...
Wararka Maanta : Maxay tahay ujeeddada ay ISRAEL ka leedahay ku biiritaanka Midowga Afr...
Wararka Maanta : Tartanka Gabayada oo ka bilaabmay magaalada Buuhoodle